Kaydiyaha & Warshadda Wakiilada Kaaliyaha Kiimikada | Soo -saareyaasha Shiinaha ee Wax -Soo -saarayaasha, Soo -saareyaasha Wax -soo -saaraha Wax -Soo -saareyaasha, Alaab -qeybiyeyaasha
Sahayda warshadda Triphenylphosphine oxide TPPO CAS 791-28-6 oo leh qiimo wanaagsan
Sahayda warshadda 99% 5,5-dimethylhydantoin/DMH CAS 77-71-4 oo leh qiimaha ugu fiican
Alaabooyinka la xiriira: BCDMH, DBDMH, DCDMH
Sahayda warshadda 6-Hexanalactone/6-Caprolactone oo leh qiimo wanaagsan CAS 502-44-3
Tayo sare Europium trifluoromethanesulfonate CAS 52093-25-1 oo leh qiimo wanaagsan
Sahayda warshadda Wilkinson catalyst Tris (triphenylphosphine) rhodium (I) chloride (11% Rh) CAS 14694-95-2
Wilkinson catalyst Tris (triphenylphosphine) rhodium (I) chloride (11% Rh)
Tris (triphenylphosphine) rhodium (I) chloride CAS 14694-95-2 waa magaca guud ee chloridotris (triphenylphosphine) rhodium (I), isku-duwaha isku-dubbaridka rhodium oo leh qaaciddada [RhCl (PPh3) 3] (Ph = phenyl), oo loogu magac daray curiyaha Wilkinson.
Hantida sahayda warshad koromada naxaasta Cr2Cu2O5 CAS 12018-10-9 oo leh qiimaha ugu fiican
Chromite naxaas ah
Chromite Copper waa budo, tetragonal budo ah oo aan ku milmin biyaha. Waxaa lagu diyaariyaa kuleylinta ilaa 400 ° C ee naxaas (II) chromate (VI).
Nadiifnimo sare BIS-TRIS Buffer CAS 6976-37-0 oo leh qiimaha warshadda
Daahirsanaanta: 98% min
Xirxirida: 1kg, 25kg bac/dhalo/durbaan ama sida codsi
BIS-TRIS Buffer CAS 6976-37-0, keydiyaha bayoolojiga zwitterionic, waxaa badanaa loo adeegsadaa sidii wakiil wax-ka-qabta ee cilmi-baarista noolaha iyo biochemical
Qiimaha warshadda polybutadiene-joojiyay Hydroxyl (HTPB) CAS 69102-90-5
Cas No .: 69102-90-5
Polybutadiene-ka-joojinta Hydroxyl-ka (HTPB) waa polymer teleclaw dareere ah iyo nooc qashin-qubka ah. Waxay la falgashaa fidiyaha silsiladda, wakiilka isku xira ama daaweeya heerkulka qolka ama heerkulka sare si loo sameeyo qaab-dhismeedka shabakadda saddexda-cabbir ee polymer-ka thermosetting.
Soo-saaraha Tris (2-carboxyethyl) fosfine Hydrochloride/TCEP-HCL CAS 51805-45-9
Soo-saaraha Tris (2-carboxyethyl) fosfine Hydrochloride/TCEP-HCL
Tris (2-carboxyethyl) fosfine Hydrochloride/TCEP-HCL waa wakiil yaraynta thiol-aan lahayn ur leh oo leh codsiyo badan oo ku jira kiimikada borotiinka iyo cilmi-baaris proteomic oo udub-dhexaad u ah fududeynta tirada ee yaraynta curaarta disulfide. Isku -dhafka isku -dhafan ayaa si fudud loo milmi karaa oo aad ugu deggan xalalka aqueous. Dhab ahaantii TCEP HCl waxay ku deggan tahay biyo -biyoodka, aashitada iyo xalalka aasaasiga ah.
Sahayda warshadda 99% 1-Methylimidazole CAS 616-47-7 oo leh qiimo wanaagsan
CAS Maya .: 616-47-7
1-Methylimidazole waa unug dabiici ah oo heterocyclic udgoon leh oo leh qaaciddada CH₃C₃H₃N₂. Waa dareere aan midab lahayn oo loo isticmaalo dareere khaas ah, saldhig, iyo hordhac u ah dareeraha ionic qaarkood. Waa heterocycle -ka nitrogen -ka aasaasiga ah iyo sida kuwa la midka ah ee saldhigyada nukleoside kala duwan iyo sidoo kale histidine iyo histamine.
Sawir qaade 1173 dareere CAS 7473-98-5
Sawir -qaade 1173 waa hufnaan sare oo sawir -qaade UV ah wuxuuna leeyahay astaamaha urta hooseysa, jaale aan jirin iyo xasiloonida midabka wanaagsan. Waxaa si habboon loogu dari karaa sawir -qaadeyaal kale. Daawooyinka UV ee daweynta iyo khadadka. Daaha cad ee qoryaha, balaastikada iyo biraha, varnish -ka dul -dhaafka ah.